Aqoonyahnka Somalida Ogadeniya iyo kaalinta ay halganka kaga jiraan.
Nin u dhaqdhaqaaqa xaquuqal insaanka ayaa waxa u yidhi isaga oo ka hadlaaya aqoonyahanka madaw ee Marykanka ”waxa jira aqoonyahan madow ah oo bulshada ay ka dhasheen culays uun ku haya,faaiido ay u keenaan iska daaye”.
Aniga waxay ila tahay in uu aqoonyahanku ka koobanyahay iftiin wax hogaamiya marka uu kacaan ama halgan jiro, waliba waxa weeye xadhiga isku xidha waxyaabaha aan lataaban karin & waxyaabaha lataaban karo.
Sidii aynu u dhibaatada dadkeena haysata uga saari lahayn oo aynu ugu dagaalano xoriyadeena, waxa kaliya ee aynu ku gaadhi karaa waa in aynu dadkeena wax bartaan, marka aan sidaas leeyahay u jeedadaydu ma aha in halganka lagula jiro gumaysiga Itoobiya la joojiyo ee waxa aan kawadaa hadii ay dadkeenu wax bartaan si sahlan ayaynu guusha aynu higsanayno ku gaadhi lahayn.
Waxa aan u kala qaybiyay aqoonyahanka Somalida Ogadeniya 3 kooxood oo kala ah:
· Aqoonyahn wanaagasan
· Aqoonyahn xun
· Aqooyhan jahwareersan
Waxanan sidan ugu kala qaybiyay aqoonyahanka Somlaida Ogadeniya in aan si fiican dadka maqaalkan akhrisanaya ama dhagaysanya aan ugu kala qeexo, koox waliba waxyaabaha ay ku sifoobaan si aan sharaxaad uga bixiyo.
Waxan u malaynaa in ay cadahay in aqoonyahan kasta uu ilahay ku manaysatay aqoon u ummadiisa iyo dalkiisaba uga faa’iidayn karo haddii u aqoontiisa sifiican u adeegsado.
Waxaan halkan isku dayayaa bal in aan tuso akhristayaasha ama dhagaystayaasha, sidee baynu u aragnaa aqoonyahanka Somalida Ogadeniya, kaalintii looga baahanaa halganka ma ka soo baxeen? Iyo sidii aynu u kala ogaan lahayn muhimada iyo khatarta ay halganka iyo umaddooda u leeyihiin.
· Aqoonyahanka Wanaagsan’
Aqoonyahanka wanaagsan waxay leeyhiin aragti fog oo aad u fiican wax badan oo horumar lehna waxay u qabtaan wadankooda & bulshadooda. Waxay awood u leeyihiin in ay xaliyaan arimaha bulshada,siyaasada, dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka dhaqan ee ka dhex abuurma bulshada ay ka dhasheen. Guud ahaan aqoonyahanka wanaagsan waa iftiinka dhabta ah ee bulshada Somalida Ogadeniya. Waxa kale oo ay yihiin hogaamiyayaal qaali ah oo mabda leh, naftoodana way ku kalsoonyihiin ismana sheegsheegaan. Aqoonyahanka wanaagasani waa aamin bulshdiisuna way ku kalsoontahay, waxayna hadh iyo habeen u halgamayaan oo ay naftooda, maalkooda & wakhtigoodaba u hurayaan, sidii ay dadkooda dhibka haysata uga saari lahaayeen
· Aqoonyahnka Xun
Aqoonyahanka xun waa kuwa naftooda uun ka fikira, aragtidooduna badanaaba waa mid wax dumisa, waxay bulshada la dhex ordaan been iyo walaac. Kooxdani waxay had iyo jeer diyaar u yihiin in ay shisheeyaha u shaqeeyaan oo ay dadkooda iyo dalkoodaba baabiyaan. Hamigooduna waa in ay awood iyo lacag helaan, waana laba wajiilayaal, wax mabda ahana kuma shaqeeyaan, kuwa waxqabadka ahna way eedeeyaan si ay dhaliishooda u qariyaan, marmarka qaarkood waxay ka shidaal qaataan oo ”refrence” u ah garaad aan cilmi ku dhisnayn oo qabiilkoodu u yeedhiyeen, carabkoodana sida hubka wax gumaada ayay u siticmaalan ,bulshadoodana culays bay ku hayaan, waana mashaqysatayaal marka runta loo kaco.
· Aqoonyahanka jahwareersan
Kooxdan saxdexaad ee aqoonyahanka ahi aad bay danaysatayaal u yihiin, aqligooduna wuu yarayahay, jahwareerkan oo ay ugu wacan tahay(lack of identity) ama (identity crises) ”dal uu leeyahay oo uu ku abtirsado ma uu garanayo” mar Soomaliya dhinaceeda ayuu hanqaltaagi, mar Ogadeniya marna Itoobiya. Waxay kooxdani u oomanyihiin in ay wax xukumaan. Aqoonyahanka jahwareeresan had iyo jeer dhinaca dabayshu u socto umbay iska raacan, xaaladoodu waa halkeebuu roob ka da’ay?, waxay dan kaleeyihiin oo aan nafttooda ahayna majirto, si dhib yarna way u milmaan, hadday Mareykanka, Ingiriiska ama dalal kale u qaxaan waxay dhabarka u jeeddiyaan bulshadii ay ka dhasheen oo u baahan!! wax kastana way ka cabsoodaan, war hanna gubina iyo waxyaabo kale ayay aamin sanyihiin, isku kalso! oni malaha.
Waxa lawada ogsoonyahay in 77kii wixii kadanbeeyay ay Somalida Ogadeniya aad iyo aad wadanka gudihiisa iyo dibada ay wax u barteen, waxana dhaqan iyo caado inoo ahayd marka u ilmo u dhasho dadkeena in loogu ducayn jiray in uu noqdo ilmahaasi kii dalkiisa , dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Waxayna qoyskii dhalayna u rajeeyaan in uu ilmahoodu noqdo maalin maalmaha ka mid ah Hogaamiye, Macalin, Diriktoor, Professor, Engineer Janan iwm.oo u noqdo masuulkii bari oo ay wadankooda iyo dadkoodaba si daacad ah ugu shaqeeyaan. Hadaba dhaqanka dadkeenu sidaas buu ahaan jiray , waalidiinteenana wax walba ha ku qaadato ee waxay ku dadaali jireen sidii ay wax inoo bari lahaayeen
Imisa ayay ducadaasu looduceeyay barigii u yaraa anfacaday, oo masuliyadii dadkiisa iyo dalkiisa ka saarayd ka soo baxday?
Sua’ashan waxa aan u dhaafi akhristayaasha qoraalkan in ay iyagu ka jawaaban.
Waxaan la kulmay qaar ka mid ah aqoonyahanka Somalida Ogadeniya intooda badanina waa anaaniyiin(mester anaa), dan iyo heellana ka malaha wadankoodii iyo dalkoodaba, in ay aqoonyahan fikradiisu sidaas yahay la’arkona waa mid murugo leh, sababta oo ah waxay iloobeen masuuliyadii iyo wajibaadkii dadkooda iyo dalkoodaba kasaaraa. Waxaa iyadauna murugo kale leh sii ah dadkii aqooyahanka ahaa ee aan dhibaatooyinka dadkooda iyo dalkooda haysata aan ka damqanayanin oo hadda dibada dagan oo daawadayaal ka noqday waxyaabaha wadankoodii ka dhacaya.
Ninkii walaalkeena Marykanka madow ahaa sida u sheegay weeyaane, kuwa aan maanta aqoontooda wax ugu qabanin dadkooda iyo dalkooda oo u baahan waa aqoonyahan beenbeen ah, oo waliba culays ku ah bulshaduu ka dhashay. Waxan rajaynayaa in ay mar dhici doonto in maxkamad la saaro laguna iqaabo waxayaabaha hagardaamada ah ee ay ummadooda iyo halganka lagula jiro gumaysaiga Itoobiya ugaystaan.
Waxa iyaduna xusid mudan in loo mahad noqo oo loo hanbalyeeyo aqooyahanka dadaalka ugu jira hadh iyo habeenba sidii ay ummadooda Somalida Ogadeniya aayahooda uga tashan lahayeen. Geesiyiintii naftooda huray si ay wadankooda u xoreeyaana waxa lagayaabaa in ay dadka qaarkood iloobaan ,laakiin taariikhda ayaan maraba ilboobaynin, waxaa xasuusan doona jiilal faro badan oo soo socda.
Rajada Wayn ee aynu mustaqbalka sugaynaa waa aqoonyahanka wakhti kasta hawsha ugu jira in ay dadkeenu wax noqdaan, waxayna ummadooda u qaban karaan waxyaabo faro badan oo ay ka mid yihiin, sidii loo kasban lahaa dad u dhashay wadamada reer galbeedka oo ay qadiyadeena ka dhaadhiciyaan oo ”activist” inoo noqda oo fagaare kasta oo la isugu yimaado qadiyadeena u dooda, sidii naag Profaysarad ahayd oo Denish ah oo shir aannu ka qayb galay oo arimaha geeska Afrika lagag hadlayay, u doodaysay sidii loo aqoonsan laha qadiyad aan saldhig sharci lahayn, oo la hubo in qadiyadeenu 100% ka saxsanyahay kana xaqsantahay, miyeynaan sidaas oo kale yeeli karin?
In aynu faafino dhibaatooyinka dadkeena lagu hayo oo aynu ka qayb galo shir walba oo arimaha xaquuqal insaanka & siyaasada geeska Afrika lagag hadlaayo.
Qof kasta oo aqoonyahan ah waxa wadankiisa iyo dalkiisaba ka saaran waajib in uu wax u qabto, hadaba hadii aynu taas isla garano, muhiim ma aha in jago la inoo wada magacaabo ama cid amar aynu ka sugno ee qof waloowba inta meesha aad joogto aad ka guntato waa in aynu waajibka ina saaran iyo kaalinta inagu aadan aynu buuxinaa
Dadka caadiga ahna waxa saaran iyagan masuuliyad wayn in ay wax laqabtaan aqoonyahankooda wanaagsan ileen kaligood waxaba ma qaban karaane. Si guusha kama danbaysta ah loo gaadho aniga waxay ila tahay dhibaatada aqoonyahanka Somalida Ogadeniya haysata waa midnimo la’aan , waxaynu la wadaagnaa arintaas Soomalida iyo wadamada Afrikaan oo idil, waxayna dugsanaysaa sababo badan.
Waxaan hubaa hadii ay aqoonyahanka Somalida Ogadeniya ay isuyimaadaan oo ay ka wadashaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dadkeena & dalkeena haysta si degdeg ah oo sahalan ayaa xal loogu heli lahaa. Bulsho waliba oo aduunka ku nool aqoonyahanku waa kuwa ugu garaadka sareeya, laakiin hadii ayna midnimo iyo daacadnimo jirin oo aan lawada hadal, kaas oo kusalaysan anshaxa madani ah, & adeegsiga mabaadiida cilmiga wadahadalka iyo wadaxidhiidhka (communication principles), aqoonyahanka waxba ma taro hadii taas la waayo. Waxaa waajib ku ah qofka aqoonyahanka ah ee Soomalida Ogadeniya in uu ka qaybqaato halganka lagula jiro gumaysiga Itoobiya, waxaana loo baahanyahay inta la iska dhigo meel doonista rabitaan shaqsiyadeedka, waa in aqoonyahankeenu u guntadaa sidii ururka jira loo xoojin lahaa ! korna loogu qaadi lahaa abaabulka shacabkeenna qurbaha ku nool (diaspora) ee intooda badan qadiyadda ka jiifa, oo aan ku dadaalo sidii ay qadiydooda u taageeri lahaayeen.
Waana in aan dadaal dheeraad ah u gallo sidii ay inta badan shacbiga Ogadeniya ay legitimacy iyo walaayada u siin lahaayen(ugu hiilin lahaayeen) ururka ONLF. Iyada oo aanan hilmaamaynin in fikrado lagu kala gadisnaan karo, haddii u yoolkeenu yahay in aynu dhibaadad dadkeena ka saaro waxa inoo dhaxeeyaaba waa wax yar oo farsamo(technic) ah umbuu noqon karaa, waa hadii ay daacada inaga tahay in dadkeena dhibka laga saaro. Guusheena oo hadda maalin ay nooga dhawdahay aynan jirin ilaa iyo maalintii u Ingiriisku Itoobiya inagu wareejiayay,sababta oo ah Itoobiya oo aan mid ahayn, awal mid bay inoo ahayd oo waxaa jiray wax la yidhaahdo( ya itobiya andhinat) isku mar bay inagu soo duuli jireen, maanta qolo waliba deegaankeeda umbay ilaashanaysaa ee qoloqolo ku soo duuli m! ajirto iyo halgankeena oo maanta heersare maraaya.
Waxaa kale oo xusid mudan qaar ka tirsan aqoonyahanka Soomaalida Ogadeniya ayaa waxay dabada lagaleen qabiil, arintanina waa dhibaatooyinka ugu waa wayn ee aqoonyahanka kala fogeeyay sababta oo ah, dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacay ayaa saamayn wayn ku yeelatay, laakiin waxa aynu wada ogsoonahay qabiil heerka uu Soomaaliya gaadhsiiyay iyo faaiido daridiisa, guul waxaa lagu gaadhi karaa urur(oraganization) hadaf iyo stratijiyad leh. Gaar ahaan aqoonyahankeenu waxa uu aqooyhahanka kale kaga duwanyahay, wadankeena oo gumaysatayaal faro badan oo kala duduwan ay gacanta ku dhigeen oo ay raadad badan oo kala nooc ah ay bulshada dhexdeeda ku reebeen sida Viruska la iskutalaalo oo ka mid yahay cudurka cusub ee SARS(Severe Acute Respiratory Send rum) ” cudurka halista ah ee ku dhaca neef-mareenka” kaas oo da! dka si sahalan ay isu qabadasiin karaan , waa in aynu la dagalamnaa sida ay dunidu cudurkan ula dagaalamayso, oo aynu xakamaynaa, waxaana lagu xakamayn karaa aqoonyahanka oo si wada jir ah uga qayb qaata dabargoynta cudurka qabiilka.
Waxaa cad in ay aqoonyahanku yahay lafdhabarka & iftiinka bulshada, ee go’ooyin aan ahayn dhiniciina ayay ka jiiftaaye kaca oo ummadiina wax u qabta indinka ayaa la idin sugayaaye!!!!!!!!.
”Qofkii ONLF qabiil ku raacaa wuu khaldanyahay,
Qofkii ONLF qabiil ku diidaana wuu khaldanyaha”
Midnimo waa xoog
Xoogna waa xoriyad
Xoriyadna waa nolol!
Sadxeda kooxood ee aan aqoonyahanka Somalida Ogadeniya u kla qaybiyayna bulshada ayaa nin walba waxa u yahay ku sifayn
Guul & Gobonimo ayaa inoo rajaynayaa.
UNICEF: Somalia Has Unique Chance to Halt AIDS Read Here.... [Reuters.com]